China QDF-400 WP n'ihu Production System Of Jet Mill N'ihi 400kg factory na-emepụta | Qiangdi
Nke mbụ, ihe oriri sitere na onye na-eri nri-ihe a na-ebufe na nke mbụ 3 m3mixer maka premixing, onye na-anakọta uzuzu ga-anakọta ájá n'oge usoro nri, mgbe ahụ, ihe nchekwa 3m3 hopper na-agwakọta ihe, wee banye na jet jet maka milling.
Usoro WP kachasị ewu ewu na Pakistan-QDF-400 na-aga n'ihu na -emepụta usoro dị ka n'okpuru Usoro eserese na foto
Usoro ọrụ na usoro
Nke mbu, nri ihe oriri sitere na nri - ihe ndi a gbanwere na nke mbu 3 m3igwekota maka premixing, na ájá mkpoko ga-anakọta ájá n'oge nri usoro, mgbe ahụ, 3m3hopper ụlọ ahịa agwakọta ngwongwo, mgbe ahụ banye ugboelu na nkume igwe nri maka-egwe ọka, na mmepụta urughuru size nwere ike gbanwee site ukpụhọde dị iche iche n'usoro n'usoro ọsọ nke classifier wheel ,. Mgbe igwe na-egwe ọka, ihe ga-agafere ajọ ifufe ahụ site na ike nke onye na-edepụta ihe na onye na-ekpo ọkụ ájá n'elu nke mbụ 4m3 igwekota, nyefee na nke abụọ 4m3 kehoraizin rịbọn igwekota maka agwakọta tupu ngwugwu ma ọ bụ nyefee WDG usoro.
1.The igwe usoro a n'itinye fluidized-bed ugboelu na-arụ ọrụ ụkpụrụ na elu arụmọrụ, na urughuru size nkesa bụ edo.
2.The nri usoro bụ na mwepu mgbali ikuku njem, na-agwụ ike na-agbakwunyere iji gbochie ájá emanation.
3.Ma usoro mbu na nke ikpeazu na-etinye ihe ntanye abuo ma obu uzo ozo di iche iche nke na-achota ihe ndi ozo zuru oke.
4.The ngwaahịa tinyekwa nwere ike ozugbo jikọọ na akpaaka mbukota igwe.
5. A na-achịkwa sistemụ niile na njikwa PLC dịpụrụ adịpụ. Ọrụ dị mma na nlekọta, arụmọrụ akụrụngwa.
6.Low oriri ike: ọ nwere ike ịchekwa 30% ～ 40% ike ma e jiri ya tụnyere ndị ikuku pneumatic pulverizers.
7. Ọ bụ na ọdabara ndinuak elu inggwakọta ruru ihe siri ike n'ihi na-azọpịa na viscous ihe.
Nkọwa nkọwa maka akara WP dum
Air iyi system- ikuku Compressor, mmanụ remover ， ikuku nchekwa tank, ikuku ifriizi draya, kpọmkwem iyo.
Compressor na-eji mpikota onu ikuku, otu-ogbo, mmanụ-agbara na chụpụrụ site moto, nke na-agụnye ikuku ọgwụgwụ, moto, mmanụ / gas separator, mmanụ oyi, ikuku oyi, ofufe (maka ikuku-mma ụdị naanị), mmiri ọnyà, electric akara kabinet, gas pipeline, mmanụ pipeline na mmiri pipeline (n'ihi na mmiri-mma ụdị naanị), ụkpụrụ usoro. E nwere ụzọ nke conjugated rotors n'ime casing. Nwoke rotor nwere ezé 4, nwanyị rotor nwere ezé isii. Nwanyi rotor na-esochi rotor nwoke na oke ọsọ. Site na nhapụ ezé na-erughị n'etiti 2 rotors, ikuku sitere na ntinye mmiri na mmanụ a na-ete mmanụ site na casing na-eji nwayọọ nwayọọ na-enwe nrụgide dị elu. Mgbe ezé na-ewepụ ezé dị n'ọdụ ụgbọ mmiri, ngwakọta ikuku / mmanụ na-asọ site n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, na-asọba n'ime mmanụ / gas separator iji kewapụ mmanụ site na ikuku. Next, ikuku eruba site na kacha nta nsogbu valvụ, ikuku oyi na mmiri ọnyà, n'ikpeazụ ka ikuku nnyefe pipeline. Iche iche mmanụ na-idobe na ala nke separator, mgbe ahụ na-eruba n'ime mmanụ oyi, mmanụ nyo na n'ikpeazụ ka ikuku ọgwụgwụ maka egweri iji na N'ihi nke esi nsogbu.
Hot na iru mmiri na oyi na-atụ ikuku ịbanye mbụ tupu mma okpomọkụ exchangers (ndị evaporator nke oyi abịakọrọ ikuku ka okpomọkụ mgbanwe) iji belata ibu na evaporator, mgbe kpo oku na abịakọrọ ikuku atara si oyi, pụọ saturation. Mgbe ahụ abatakwa evaporator e mma mma 12 'n'okpuru, re-abanye separator ga-precipitated na jụrụ usoro nke mmiri e kewapụrụ, ugwu sub-Shui ngwaọrụ discharges. Site na ikuku oyi na-ekpo ọkụ na ọkụ nke onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emepụ.
ebe nchekwa ikuku (ụgbọ mmiri nrụgide), nke a makwaara dị ka ebe nchekwa ikuku na-ejupụta, bụ ụgbọ mmiri nrụgide nke ejiri mee maka ịchekwa ikuku ikuku. A na-ejikarị ya maka ịchekwa nchekwa gas, ma rụọ ọrụ nke ime ka usoro nrụgide dị ike, ka ị ghara ịbudata na ịbudata nke ikuku ikuku na iwepụ ọtụtụ mmiri mmiri. Gas tank tank na-ejikarị arụ ọrụ cylinder, isi, Flange, nozzles, ihe akara na nkwado na akụkụ ndị ọzọ na mmiri. Tụkwasị na nke ahụ, ejikwa valvụ nchekwa, nlele nrụgide, valve drain na ngwa ndị ọzọ iji mezue ọrụ nke usoro mmepụta dị iche iche.
Isi akụkụ-jet igwe nri na &gwakọta & ájá usoro nchịkọta
Ngwaahịa a bụ bedized pulverizer na mkpakọ ikuku dị ka ndinuak ọkara. E kewara igwe ihe na ngalaba 3, ya bụ ebe ndinuak, ebe nnyefe na ebe grading. A na-enye Mpaghara Grading na wiilị grading, na ọsọ nwere ike gbanwee site na ntụgharị. The ndinuak ụlọ mejupụtara ndinuak nozulu, feeder, wdg The mgbanaka ikuku ọkọnọ diski n'èzí ndinuak tragaasi jikọọ na ndinuak nozulu.
Jet igwe nri- n'okpuru omume nke ike ikuku nke ọkpọkọ ọkpọkọ na ike ikuku nke onye na-agba akwụkwọ, ihe na-abata na bed-bed n'ime igwe ugboelu. na-enweta ntụ ntụ dị iche iche.
PLC Control usoro- The usoro adopts nwere ọgụgụ isi ihuenyo mmetụ akara, mfe ọrụ na ezi akara. Nke a na usoro adopts elu PLC + ihuenyo mmetụ akara mode, na ihuenyo mmetụ bụ ọrụ ọnụ nke usoro ihe a, N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa. Ka n'ụzọ ziri ezi ịghọta igodo niile 'ọrụ na ihuenyo mmetụ iji hụ na ezi ọrụ nke usoro ihe a.
Nri Nke Ulo-Flexibly ejikọrọ na ájá mkpoko zere ájá na-eri eri, maka continous nri.
Onye na-ekewa mmiri na ikuku na-anakọta uzuzu–Products ikpokọta na ájá ikpokọta na-achụsakwa akụrụngwa eruba direction ma zere ìgwè ihe. Gbaa mbọ hụ na imegharị ájá na usoro nke mmepụta iji gbochie nchedo gburugburu ebe obibi nke nrụpụta dị ọcha na nsị ọkụ.
Ejima ịghasa igwekota -ihe ogologo akpali na ịghasa imewe ， nke na-agwakọta ihe niile kpamkpam site na mgbanwe nke mgbanwe na ntụgharị.
Ejima ịghasa igwekota integrates ntụ ntụ, granule na mmiri mmiri inggwakọta. A na-emecha ntụgharị nke igwe na-agwakọta ejima ejiri igwe na ndị na-ebelata cycloid. Na asymmetric agwakọta site na kposara abụọ, na-akpali akpali iche ga-gbasaa na-akpali akpali ọsọ ga mee ngwangwa. A na-akwalite igwe na-agwakọta site na gburugburu abụọ nke ngwa ngwa, na-akpụ ogidi abụọ na-enweghị atụ nke na-arịgo site na mgbidi cylinder. Ogwe aka ntụgharị site na gburugburu gburugburu, na-eme ka ihe dị gburugburu nke ọkwa dị iche iche banye na stud n'ime envelopu, akụkụ nke ihe a na-akwalite, akụkụ nke ọzọ nke ihe a na-atụgharị, ka ị wee nweta ihe zuru ezu na-ebu ihe mgbe niile.
Kwụ gburugburu rịbọn igwekota-Ọ dịkwuo mfe ịme ngwaahịa ụfọdụ nke kwesịrị ịgbakwunye adjuvant ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ na ngwaahịa emechara. Na inggwakọta ka mma ma zie ezi karịa ejima ịghasa igwekota. ala dị elu karịa Ejima ịghasa igwekota, mfe iji wụnye.
Kwụsị rịbọn igwekota nwere mpempe akwụkwọ na-enweghị atụ, mkpuchi mkpuchi nwere oghere (ma ọ bụ na-enweghị), otu ogwe osisi ejiri okpukpu abụọ agwakọta agitator, igwe nnyefe, etiti nkwado, akara akara, usoro mmefu na ihe ndị ọzọ. Mpepu Ribbon bụ ọkwa abụọ mgbe niile. Mpempe akwụkwọ oyi akwa na-eme ka ihe si na nsọtụ abụọ ruo na etiti yana eriri dị n'ime ime ka ihe gbasaa site na etiti ruo nsọtụ abụọ. Akụrụngwa na-etolite mgbe ọ na-agagharị ma na-agwakọta agwakọta.
Akụkụ ọzọ –Draft fan na Water scrubber
Draft ofufe- Mee usoro WP dum ka ọ nwee nrụgide na-ezighi ezi site na ike nke onye na-agbapụta agbapụta, si otú a na-ebugharị ihe ahụ iji gwepịa ma hapụ ikpochapu gas site na sistemụ egweri.
Ihe nchacha mmiri- dị ala karịa 0.5um ntụ ntụ na-abata na-ehicha mmiri ma na-etinye ya na mmiri oyi akwa mmiri, wụsara ya na cone ala nke mmiri ahụ. iji zere gburugburu ebe obibi na-emetọ ájá.
A na-ewebata gas nke ikuku nwere tinyere ntuziaka dị mkpa site na akụkụ nke ala ahụ ma na-agbagharị. A na-ekewa ụmụ irighiri ájá site na centrifugal ma tụba ha n'ime mgbidi nke cylinder ahụ. A na-etinye ha mmiri site na oyi akwa ihe nkiri mmiri na-asọpụta na mgbidi dị n'ime nke cylinder ahụ wee wepụta ya site na nsị ájá yana cone nke mmiri ahụ. A na-eme ihe nkiri mmiri site na ọtụtụ nozzles ndokwa na akụkụ nke elu nke cylinder ka ịgba mmiri dị na mgbidi nke ngwaọrụ ahụ, n'ụzọ dị otú a, a na-ekpuchi mgbidi dị n'ime cylinder ahụ mgbe ọ bụla obere ihe nkiri mmiri na-agbanwegharị na-agbadata ala iji nweta nzube nke imeziwanye mwepụ ájá.
Nke gara aga: Jet Mill WP System – Tinye na Ubi Agrochemical
Jet Mill WP System – Tinye na Agrochemical ...
Battery Industry na ndị ọzọ Chemical Ihe Anyị ...
Nitrogen Protection Jet Mill System N'ihi Special ...